अमेरिकन लाइफ, क्रेडीटको महत्व र फ्रडको आतङ्कबाट बच्ने उपायहरु — News of The World
ढोरपाटनको नाम अन्तराष्ट्रिस्तरमा, स्थानीयको अवस्था भने दयनीय
मालिन्दो एयर दुर्घटनाका कारण रोकियो नेपाली कांग्रेसको बैठक
शिक्षा समिति गठन, आवस्यक परे विद्यालय खारेज गर्ने निर्णय
१२ महिला सहित १८५ नेपाली युएईको जेलमा
चितवन निकुञ्जमा जिप सफारी गर्दै जनप्रतिनिधि
पोथिलाई आकर्षित गर्न नाँच देखाउँदै मयुर
अमेरिकन लाइफ, क्रेडीटको महत्व र फ्रडको आतङ्कबाट बच्ने उपायहरु
सानुबाबु सिलवालपौष ७, २०७४
कुरोको चुरो यहिँबाटै सुरु गरौं होला । तपाईं अमेरिकामा हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, एकल वा बालबच्चा र परिवारसहित हुनुहुन्छ । यहाँ कानुनीरूपमा बसोबासका लागि कागजात बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नुभएको छ । तर, अमेरिकी जीवनशैलीमा थप सहजताका लागि थुप्रै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति वा सर्वसुलभताका लागि थप आधारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ ? जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सुविधाका वस्तु, सेवा वा साधनको पहुँचका लागि उधारो सेवा, ऋण सेवा, सुलभता र छुटको सेवा, घरगाडी जग्गा जमिनलगायतका सुविधा तथा सेवाहरूको चाहनामा हुनुहुन्छ ?
तपाईं डीभी परेर वा अन्य पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा भर्खरै अमेरिका आउनुभएको छ वा आउँदै हुनुहुन्छ ? वा आउने क्रममा हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई थप सहजता, जानकारी एवं ज्ञानका लागि उपयुक्त हुने गरी यो लेख तयार गरेको छु ।
सर्वसम्पन्न मुलुक, अवसरको मुलुक, काम र श्रमको सम्मान हुने मुलुक, महिला र बच्चाहरूको अधिकार सम्पन्न मुलुक, थोरै डलर वा डलरबिना नै प्राप्त हुन सक्ने सर्वसुविधाको मुलुक, आर्थिक नियमितता, जिम्मेवारीसहितको दैनिकी र गतिविधि मूल्यांकन हुने मुलुक, कानुनको मुलुक, श्रम र क्षमताले थोरै समयमा नै आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि पहुँच पुग्ने मुलुक । जे जसरी सम्बोधन गरे पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अधिकार र आर्थिक सम्पन्नता र स्वतन्त्रताको अवसरयुक्त मुलुक अमेरिकामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सुन्दर सपनाहरू र त्यसलाई यथार्थमा बदल्न जीवनचर्याका गतिशिलता सुरु हुन्छ ।
राम्रो रोजगार, सुन्दर परिवार, बच्चाहरूका लागि उत्तम शिक्षा र भविष्य, सुन्दर गाडी, सुन्दर घर र जमिन, ब्यवसाय र सकसविहीन जीवनशैली, स्वतन्त्रता, सुन्दर बसाई, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ खाना, उपचार, आवश्यक पर्दा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राम्रो आर्थिक हैसियत यी सबै सुन्दर कल्पना र चाहनाभित्र पर्दछन् । तपाईं हामी सबैले यसका लागि कडा परिश्रमसँगै आफूलाई गतिशिल र क्रियाशिल राख्न जरुरी छ । घर किन्न जानुहोस्, अपार्टमेन्ट वा घर भाडामा लिएर बस्नुहोस्, गाडी किन्न, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न वा अन्य सेवा वा सुविधाका निम्ति तपाईं हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप जिम्मेवारीपूर्ण, गतिविधि अत्यन्त जिम्मेवार र महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै गतिविधि, क्रियाशिलता र गतिशिलताका लागि अमेरिकामा क्रेडिट इतिहास बनाउन जरुरी छ, यदि तपाई अमेरिकी जीवनशैलीलाई सहज बनाउन चाहनुहुन्छ भने । क्रेडिट कार्ड, कुनै पनि चिज, सेवा, वस्तु उधारोमा लिने वा सहुलियत वा छुटमा लिने वा कम ब्ययभार वा कम ब्याजदरमा लिने र चलाउने आधार नै तपाईंको क्रेडिट इतिहास हो । क्रेडिट इतिहास स्थापनाका लागि यी सबै महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने गर्दछ । राम्रो क्रेडिट इतिहास बनाउन जिम्मेवार तरिकाले क्रेडिटको उपयोग र प्रयोग गर्नु पर्दछ । के हो त क्रेडिट जिम्मेवारी भनेको ? के के कारणले क्रेडिट बनाउन सहयोग गर्दछ त ? के कसरी क्रेडिट ध्वस्त हुन सक्छ त ? यसका लागि क्रेडिट बनाउने र उपलब्ध सेवा र सुविधाको उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन जान्छ ।आफ्नो घाँटी हेरेर मात्रै ऋण वा उधारो लिने बानी बसाल्नुहोस् । पाइयो भन्दैमा आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी वा तिर्नै नसक्ने गरी उधारो क्रेडिट सुविधाहरू नलिनुहोला । समयमै तिर्न नसक्दा वा भुक्तानी अनियमित हुँदा तपाईंको क्रेडिट इतिहासमा नराम्रो दाग लाग्दछ ।
बढीमा दुई वटासम्म क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुहोला । जसका लागि सानो रकम दुई सय डलरदेखि पाँच सय वा एक हजार डलरसम्मको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरे हुन्छ । क्रेडिट नभएका ब्यक्तिहरूले खर्च गर्ने र तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुहोला । जसले गर्दा तपाईंलाई भुक्तानीमा हुने अनियमितताको जोखिम हुँदैन । र, त्यसको एकाध वर्षमा तपाईंले थप रकमको क्रेडिट निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । सकेसम्म सुरुमा एउटा क्रेडिट कार्डबाट मात्रै सुरु गर्नुहोस् । क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूको हकमा केही वर्षको प्रयोग इतिहासलाई निम्नतम आधार मानिन्छ । क्रेडिट कार्डमा जति रकम छ, उत्ति नै प्रयोग गरी समयमै पूरा तिर्नु राम्रो हुन्छ । बढी क्रेडिट कार्ड लिँदा भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ । र, क्रेडिट अनुगमन गर्ने निकाय, खोजी गर्ने निकाय वा तपाईंले थप ऋण वा सेवा सुविधा लिन जाँदा सबै इन्क्वाइरीहरूले तपाईंको क्रेडिट बढ्दैन ।
कति वर्ष लाग्छ त क्रेडिट बन्न ?
अमेरिकामा तपाईंको क्रेडिट स्थापित हुन, बन्न र बढ्न यत्ति नै ठ्याक्कै समय लाग्छ भन्न सकिँदैन । अमेरिकामा क्रेडिट इतिहास बनाउन लाग्ने वर्षौं वर्ष ध्वस्त हुनचाहिँ दुई हप्ता र बढीमा एक महिना भए काफी हुन्छ । दुई महिनापछि त बर्बाद नै हुन्छ । सामान्यतया अमेरिकामा घर, अपार्टमेन्ट, लिन, बैंक खाता खोल्न, क्रेडिट कार्ड लिन, काम गरेको कर दाखिला गर्न, केबुल, बत्ती, पानी, बिजुली, फोन आदि निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न र भुक्तानी नियमित गर्दा समय लिन्छ । करिव दुईदेखि तीन वर्षको नियमित, संवेदनशील र जिम्मेवारपूर्ण कारोवारले तपाईंको क्रेडिट इतिहास बन्न सुरु गर्दछ । घर किन्न वा ठूला मूल्यका सम्पति वा सेवा लिँदा तपाईंले कम्तीमा दुई वर्ष र बढीमा तीन वर्षसम्मको कर दाखिला गरेको प्रमाण हुनु पर्दछ । त्यसैले तपाईंले नगदमा मात्रै काम गर्नुभएको छ भने कमसेकम केही रकम चेकमा काम गर्नुहोस् । जसले गर्दा तपाईंको आम्दानी आधिकारिक देखिन्छ । आफ्नो ब्यवसाय छ भने आफूलाई आफैंले चेकमा मासिक वा साप्ताहिक तलबमा राख्नुहोस् र आफ्नो एकाउन्टेन्टमार्फत् राजश्व विभाग र अमेरिकी रोजगार सुरक्षा आयोगलाई जानकारी गराई वार्षिक क्वाटरमा कर तिरी कर दाखिला गर्नुहोस् । यो तपाईंको आम्दानीको आधार भएकाले क्रेडिट इतिहासको भर्याङ पनि हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा यदि तपाईंले कुनै बैंकिङ निकाय मार्फत क्रेडिट कार्ड लिनुभएको छ, त्यसले बढी ब्याज लगाएको छ वा तपाईंलाई मन परेन भने त्यो क्रेडिट कार्ड कुनै पनि हालतमा रद्द नगर्नुहोस् । यदि क्रेडिट कार्डको सेवा बन्द गरिदिनुभयो भने तपाईंको क्रेडिट इतिहास बर्बाद बनाइदिन्छ । सकेसम्म क्रेडिट कार्ड कम लिने, लिए पनि समयमै भुक्तानी गर्दै जाने, मन परेन भने पूर्ण भुक्तानी गरिदिएर जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोला । यसो गर्दा तपाईंले ब्याज र निम्नतम रकम भुक्तानी गर्नु पर्दैन । क्रेडिट कार्ड लिँदा २४ महिना, १२ महिना, १८ महिनाको निःशुल्क ब्याजदरको क्रेडिट कार्ड लिएर ब्याज लाग्ने क्रेडिट कार्डको भुक्तानी गर्दा तपाईं जोखिमबाट बच्ने र आवश्यकरूपमा ब्याज तिर्न नपर्ने हुन्छ ।
कसरी सुरुवात गर्ने त क्रेडिट अमेरिकामा ?
सर्वप्रथम त तपाईंको बसाइ कानुनी हुनुपर्यो । तपाईंसँग अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने कानुनी ‘सोसियल सेक्युरिटी नम्बर’ हुनैप¥यो । यति भइसकेपछि जुन राज्यमा बसेपनि त्यहाँको सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने कार्यालय (डिएमभी) बाट प्राप्त हुने परिचय पत्र वा ड्राइभिङ लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) हुनैप¥यो । यति भइसकेपछि तपाईंले आफ्नो बसाइस्थल अपार्टमेन्ट वा घर आफ्नो नाममा लिने अवसर प्राप्त हुनेछ । अपार्टमेन्ट वा घर भाडामा लिँदा आफ्नै नाममा लिनुहोला । अरूसँग साथमा बस्दा वा अरूको अपार्टमेन्ट वा घरमा बस्दा तपाईको क्रेडिट बढ्दैन । महंगो ठाउँ भए मिलेर बस्नुपर्ने वा संयुक्त रूपमा लिँदा राम्रो हुन्छ वा बसाई सस्तो भएको राज्यमा सर्दा राम्रो हुन्छ । तपाईंको ठेगाना, परिचयपत्र र सोसियल सेक्युरिटी नम्बर भएपछि बैंक खाता खोल्न सकिन्छ । बैंक खाता खोलेपछि ग्रोसरी गर्दा, कसैलाई भुक्तानी गर्दा वा आर्थिक कारोवार गर्दा चेकबाट नै गर्दा राम्रो हुन्छ । बैंकबाट प्राप्त हुने क्रेडिट कार्डका लागि तपाईंले निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले सानो रकम पाँचसय डलरदेखि एक जार डलरसम्मको भए पनि लिए हुन्छ । भाडामा लिएको अपार्टमेन्ट वा घर तपाईंको नाममा भएपछि बिजुली बत्ती, पानी, केबल, फोन तपाईंको नाममा हुनेछ । यसले गर्दा तपाईंको क्रेडिट स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । सेलफोन वा अन्य अत्यावश्यक वस्तु उधारो वा काम चलाउ लिँदा तपाईंको आफ्नो नाममा लिँदा तपाईंको क्रेडिट इतिहास बनाउन आधार हुनेछ । यस्तो अवस्थामा तपाईंको नियमित भुक्तानी, जिम्मेवारपूर्ण ढंगले सदुपयोगले नै तपाईंको नियमित भुक्तानी, जिम्मेवारपूर्ण ढंगले सदुपयोगले नै तपाईंको क्रेडिट बढ्दै जान्छ । तर, यो सुविधा दुरूपयोगले वा अन्जानको भूलले, भुक्तानीमा तलमाथि वा अनियमित भयो भनेचाहिँ तपाईको क्रेडिटमा नराम्रो असर पुग्नेछ । ढिलासुस्ती भुक्तानी, भुक्तानी नै नहुने अवस्था आयो भने तपाईंको क्रेडिट रिपोर्टिङ हुनेछ । जुनकुरा कालान्तारसम्म रहिरहनेछ र तपाईंलाई भविष्यमा घर किन्दा, गाडी किन्दा वा कुनै ऋण लिँदा, ब्यापार ब्यवसाय गर्न लाग्दा वा उधारो सेवा लिन खोज्दा ठूलो क्षति पुग्नेछ र तपाईं अयोग्य ठहरिनुहुनेछ । लिएका उधारो सेवा वा कुनै पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने वस्तु वा सेवाको भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएमा ती निकायहरूले भुक्तानी गर्ने समय एक महिना दिनेछ । त्यसपछि पनि भुक्तानी नभए ती संस्थाले क्रेडिट रिपोर्टिङ गरिदिनेछ र उक्त भुक्तानीका लागि उठती गर्ने संस्था (क्रेडिट कलेक्सन) मा पठाइदिनेछ । उक्त एजेन्सीले तपाईंलाई भुक्तानीका लागि ताकेता गर्नेछ । त्यसपछि पनि भुक्तानी गर्नुभएन भने ती एजेन्सीले उक्त रकम तपाईंका जायजेथाबाट असुल उपर गर्नेछ । र, कालान्तरमा तपाईंको क्रेडिट इतिहास डामाडोल हुनेछ ।
तपाईंलाई बसेको स्थानमा केही समयपश्चात केही क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूले थोरै रकमको क्रेडिट अफर गर्न सक्दछन् । यस्तो अफर नआउँदा पनि आफ्नो खाता भएको बैंकबाट क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्नुभएन भने पनि नजिकैको सपिङ सेन्टर, ग्रोसरी कम्पनीहरूको सदस्यता लिएपछि उनीहरूले साना रकमको क्रेडिट कार्ड अफर गर्न सक्दछन् । वा तपाईंले सोध्न पनि सक्नुहुनेछ । जस्तै, वालमार्ट, साम्स क्लब, लोज, बेल्क आदि संस्थाहरूमा क्रेडिट कार्ड निवेदन दिनुहोस् । धेरै नलिनुहोस् । एक वा दुई वटा कार्ड लिएपछि प्रयोग गरिरहनुहोस् । र, तिरिहाल्नुहोस् । यसपछि तपाईंको क्रेडिट बढ्दै जानेछ । समयमै तिर्नै भने नभुल्नुहोला ।
सुरुमा १८ देखि २० वर्षभन्दा मुनिका लागि बैंक खाता खोली बैंकको क्रेडिट कार्ड सानो रकमको प्रयोग गर्ने वा विद्यार्र्थी भएमा विद्यार्थी क्रेडिट कार्डका लागि निवेदन दिने, सुरक्षित क्रेडिट कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड, एक–दुई वर्षमा क्रेडिट स्थापना हुने र नियमित भुक्तानीले बढ्दै जानेछ । तपाईंलाई गाडी खरिद गर्नुप¥यो । घर अपार्टमेन्ट वा अन्य सेवा वा खरिदमा ती सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पत्याएनन् भने उनीहरूले जमानी स्वीकार गर्नेछन् । राम्रो क्रेडिट भएका आफन्त वा साथीभाइहरूले सहहस्ताक्षरकर्ताका रूपमा हस्ताक्षर गरिदिएर ती वस्तु वा सेवाको पहुँच दिलाइदिन सक्छन् । जमानीमा लिएका वस्तु वा सेवाको भुक्तानी तपाईंले समयमै गर्न सक्नुभएन वा गर्नुभएन भने तपाईंको क्रेडिट त बर्बाद हुन्छ नै, तपाईंको जमानी बसिदिनेको क्रेडिटमा पनि नराम्रो धक्का पुग्नेछ । त्यसैले अमेरिकामा जो पायो, उसको जमानी बसिदिन मानिसहरू मान्दैनन् ।
के हेर्छ त पहिले क्रेडिट जाँच गर्दा ?
तपाईं ऋण लिन जानुभयो वा क्रेडिट कार्डका लागि निवेदन दिनुभयो वा कुनै चिज, सेवा वा वस्तु उधारोमा कुनै संस्था, ब्यापारिक प्रतिष्ठान वा निकायमा जानुभयो भने सबैभन्दा पहिले ती निकायले तपाईंको सोसियल सेक्युरिटी नम्बर, ड्राइभर लाइसेन्स नम्बर, बसेको ठेगाना र जन्ममिति माग्दछ । बितेका दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बसेका स्थानहरू, तपाईं कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ ? कति कमाउनुहुन्छ ? यी सबै सोध्नेछ । कमाइ जति भने पनि हुन्छ भनेर भ्रममा नपर्नु होला । तपाईंको वार्षिक कमाइ भनेको तपाईंले कमाइ कर दाखिलामा कति डलर देखाउनुभएको छ ? त्यति रकम मात्र तपाईंको आधिकारिक आम्दानी हो । तपाईंले कति रकम खेलाउनुहुन्छ ? कहाँ कति रकम नगदमा तिर्नुभयो ? नगदमा गरेका यस्ता कारोवार मान्य हुनेछैन । ध्यानमा राख्नुहोला, कुनै कारणवस तपाईंसँग खल्तीमा, घरमा वा गाडीमा प्रहरीले खोजतलास गर्दा दुई हजार डलरभन्दा बढी नगद फेला पा¥यो भने तपाईंले त्यो रकमको आम्दानीको आधिकारिकता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यदि तपाईंको आम्दानी पृष्टि भएन भने तपाईं कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ । तपाईंको आम्दानी, घरको भाडा वा बैंकको मासिक भुक्तानी मुख्य रूपमा हेर्ने गर्दछ । यस ब्यक्तिले मागिएको उधारो समयमै तिर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधार नै तपाईंको उक्त आम्दानी हो । तपाईंले भर्नुभएको सबै जानकारीसहित उक्त निवेदन हालिएको निकायले १० मिनेटभित्रै तपाईं उक्त उधारो लिन योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न पत्ता लगाइदिन्छ । र, स्वीकृत भएमा तपाईंले उक्त उधारो सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ । अन्यथा तपाईं अयोग्य हुनुभयो भनेर भनिदिन्छ ।
ठूलो परिवार, सानो परिवार वा एकल आम्दानी र रोजगारी गर्दा अधिकांशले पूर्णरूपमा नगदमा काम गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो आइन्दा नगर्नुहोला । कमसे कम केही रकम पेरोलमा देखाउनुहोला । बढी समस्याचाहिँ के छ भने पूर्ण आम्दानी करमा पेरोलमा देखाउँदा अमेरिकी सरकारले तोकेको आम्दानीको निम्नतम मापदण्डभन्दा बढी भएमा कर दाखिला गर्दा कर विभागबाट तिरेको केही रकम फिर्ता पाउने भन्दा उल्टो तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुरा यतिमात्रै होइन, तपाईंले अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने मेडिकल सेवा, फूडस्टाम्प र अन्य आपतकालीन सेवा गुमाउनुहुनेछ । त्यसैले काम गर्दा सबै रकम नगदमा नलिनुहोला ।
कसरी बिग्रन्छ त क्रेडिट ?
लिएका सेवा वा वस्तुहरूको गर्नुपर्ने नियमित भुक्तानी समयमा नहुँदा, अनियमित हुँदा वा भुक्तानी नै नहुँदा भुक्तानी रकमको साथमा ढिलासुस्ती शुल्क पनि लाग्नेछ । विभिन्न निकायहरूका ढिलासुस्ती रकम फरक–फरक छन् । पाँचदेखि ५० डलरसम्म ढिलासुस्ती शुल्क लाग्न सक्दछ । त्यसैले पाएसम्म थुप्रै क्रेडिट कार्डहरू लिने, निवेदन दिने गर्दा थुप्रै इन्क्वाइरीहरू हुन्छन् । जसले तपाईंको क्रेडिट डाउन गरिदिन्छ । ऋण रकम धेरै देखियो, आम्दानीभन्दा ऋण बढी देखियो भने तिर्न सक्ने जोखिम बढी हुँदा पनि तपाईंको क्रेडिट डाउन गरिदिन्छ । तपाईंका विगतका आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक रेकर्डले पनि तपाईंलाई क्रेडिट स्थापित गर्न वा बृद्धि गर्न गाह्रो हुन जान्छ । कसैले तपाईंको गोप्यता, जन्ममिति, सोसियल सेक्युरिटी नम्बर, ठेगाना, प्रयोग गरी फ्रड गरिदिएको छ भने पनि तपाईंको क्रेडिटमा धक्का पुग्नेछ । लगातार रूपमा तपाईंले क्रेडिट जाँच गरिरहनुभयो भने पनि क्रेडिट डाउन गरिदिन्छ । अस्पताल, औषधिजस्ता सेवाहरूको गर्नुपर्ने भुक्तानी ढिला भएमा वा भुक्तानी तिरेको छैन भने तपाईंको क्रेडिट इतिहास बर्बाद हुन जान्छ । काटेको चेक बाउन्स भयो र त्यसको रिपोर्टिङ भयो वा कानुनी कारवाही खेपेको अवस्थामा पनि तपाईंको क्रेडिट बर्बाद हुन्छ ।
फ्रड आतङ्क र कसरि बच्ने त ?
अमेरिकामा सन २०१४ को मात्रै हिसाबकिताब गर्दा फ्रड, स्क्यामरहरुका कारण २६ अरब ३५ करोड डलर आर्थिक क्षति भएछ अमेरिकन पिडितहरुको । अमेरिकामा बार्षिक सरदर १ करोड २१ लाख ५७ हजार ४ सय अमेरिकनहरु यि फ्रडहरुबाट पिडित हुने गरेको अमेरिकन क्रेडिट ब्युरो बताउछ र झण्डै २५ मिलियन अमेरिकनहरु सरदर प्रत्यक्ष एबम परोक्ष रुपमा प्रभाबित हुने गर्दछ बार्षिक रुपमा । मुख्यत ३ तरिकाबाट फ्रडहरुले क्षति बनाउने गर्दछ । ६१ दशमलब १ प्रतिशत क्रेडिट कार्ड दुरुपयोग गरिदिन्छ, ३५५ बैङ्क खाताबाट भने १४ दशमलब २ प्रतिशत चाहि तपाइ हाम्रो सोसियल सेक्युरिटि, ड्राइभर लाइसेन्स, जन्ममिति र बसेको ठेगानाबाट नराम्ररी पिडित बनाइदिन सक्छ । होशियार रहनु हरपल फ्रडहरुबाट आर्थिक एबम मानसिक धक्का लाग्नबाट ।
बैङ्ग खाता, क्रेडीट कार्ड ब्लालेन्स, स्टेटमेन्ट र रिपोर्ट दैनिकि जसो नै फोनबाट वा अनलाइनबाट वाच र चेक गर्न नभुल्नु होला । अनि हरेक महिना तपाइको आफ्नो क्रेडीट रिपोर्ट पनि हेर्न नभुल्नु होला । यदि शकास्पद लागेमा वा तपाइ आफुले कुनै ट्रान्जेक्सन नगरेको लागेमा क्रेडीट कार्ड कम्पनी, बैङ्ग र क्रेडीट ब्युरोमा तुरुन्त सम्पर्क राखि रिपोर्ट गर्नुहोला । हुन त हिजोआज तपाइको क्रेडीट कार्ड कम्पनी वा बैङ्कले स्वत तपाइको फ्रड मनिटरिङ्ग गरिरहेको हुन्छ र त्यस्तो भेटीएमा वा मल्टिपल प्रयोग भएमा उनिहरु आफैले तपाइलाइ तुरुन्तै नोटिस गर्ने गर्दछन् । यदि तपाइको क्रेडीट नोक्सानि देखिएमा वा कोहि कसैले तपाइको नाम, सोसियल नम्बर प्रयोग गरि दुरुपयोग गरिएको पाइएमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरि यस्ता फ्रड र यिनिहरुबाट हुनसक्ने आर्थिक एबम मानसिक नोक्सानिबाट आफुलाइ सुरक्षित राख्नुहोला ।
कसरी मापन र जोखिम हुन्छ त क्रेडिट ?
क्रेडिट इतिहासमा यसको मापन संख्या र दरमा तपाईंको आर्थिक गतिविधि र दैनिकीमा उतार चढाव भइ नै रहन्छ । कहिले माथि जान सक्छ भने कहिले तल । सामान्यतया क्रेडिट मापन ५५० स्कोरदेखि ८५० सम्म कायम गरिएको हुन्छ । ५५० देखि ८५० सम्मको क्रेडिट स्कोरलाई आधार मानी तपाईंको अमेरिकी जीवनशैलीमा सहजता र कठिनता हुने हुन्छ । ८०० देखि ८५० सम्मको क्रेडिट स्कोरलाई उच्च र अत्यन्त राम्रो मानिन्छ । यसलाई ऋण दिन, उधारो दिन वा आर्थिक कारोवारका लागि उत्तम मानिन्छ । यस्ता स्कोर भएका ब्यक्तिहरू एक अर्थमा भन्ने हो भने भाग्मानी र उच्च हुन्छन् । यसले चाहेको बेला जतिबेला पनि ऋण प्राप्त गर्नसक्ने, लामो क्रेडिट इतिहास भएको, लेखा र आर्थिक सन्तुलित भएको, सार्वजनिक रेकर्ड नभएको, उच्च सहुलियत ऋण र उधारोका लागि सबैभन्दा योग्य हुन्छन् । त्यसैगरी ७५० देखि ८०० स्कोर भएका ब्यक्तिहरूलाई धेरै राम्रो हैसियतमा राखिदिएको छ । ऋण लगानी गर्दा, उधारो दिँदा वा सहुलियतका लागि कम जोखिम भएका यस स्कोर समूहका ब्यक्तिहरूले निर्वाध रूपमा विश्वासिलो पहुँच बनाएका हुन्छन् । त्यसैगरी ६५० देखि ७०० सम्मको क्रेडिट हुने ब्यक्तिहरूलाई ऋण, सेवा तथा सहुलियतका लागि जोखिमभित्र राखिएको छ । पुरानो नकारात्मक सार्वजनिक आर्थिक अनियमित रेकर्ड, थुप्रै क्रेडिट कार्ड, अनियमित भुक्तानी विगत, थुप्रै ऋण भए पनि सेवा, सुविधा, सहुलियत र ऋणका लागि योग्य नै हुन सक्दछन् ।
६०० देखि ६५० सम्मको क्रेडिट स्कोर भएकाहरूलाई खराव क्रेडिट समूहमा राखिएको हुन्छ । भुक्तानीमा ढिलासुस्ती, कम क्रेडिट इतिहास भएको, थुप्रै एकाउन्ट, थुप्रै निगरानी र उतार चढाव भएकाहरूलाई यस समूहमा राखिएको छ । यस स्कोर समूहलाई कुनै पनि संस्थाले हतपती पत्याउँदैनन् । पत्याइहाले पनि बढी ब्याजदरमा कम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी जमानीमा वा आधासम्म वा त्योभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमात्र सेवा सुविधाका लागि योग्य हुन सक्दछन् । तर, गाह्रो हुन्छ ।
५५० देखि ६०० सम्म लाई अत्यन्त खराव स्कोर समूहमा राखिएकाले यी समूहका ब्यक्तिहरू बैंकिङ क्रेडिट कार्ड वा अन्य उधारो र सहुलियत सेवाका लागि योग्य हुँदैनन् । भइहाले पनि बढी ब्याजदरमा जमानीमा वा अत्यन्त न्यून रकम जोखिमयुक्त हुने अवस्थालाई आधार मानी त्यस्ता सेवा पाउन सक्छन् । तपाईं हाम्रो क्रेडिट स्कोर अनुगमन गर्ने, स्थापित गर्ने, घटाउने, बढाउने तीन वटा आधिकारिक निकाय छन् । क्रेडिट स्कोर र क्रेडिट भए नभएको, खराव र उत्तम भन्ने ती तीन निकायको आधारलाई मानिन्छ । एकः–ट्रान्स युनियन । दुईः–एक्सप्रेरियन र तीनः–इक्विफ्याक्स । यी तीन वटै निकायको स्कोर समान नहुन सक्छ । यीनीहरूले प्राप्त रिपोर्टिङका आधारमा आ–आफ्नै ढंगले मापन गरे पनि, स्कोरमा केही संख्यामा तलमाथि भए पनि न्यूनतम संख्याको आधारमा तपाईंको स्कोरलाई लिइन्छ । जुन स्कोर हेर्न उनीहरूकै सदस्यता लिनुपर्ने वा फ्रड अनुगमन गर्ने प्राटेक्ट माइ आईडी वा बैंकको अतिरिक्त शुल्क तिरेर ती संस्थाहरूमार्फत आफ्नो स्कोर अवलोकन गर्न वा फ्रड शंकास्पद गतिविधिलाई रोक्न सक्नुहुनेछ ।
यस्तो देखिन्छ – नयाँवर्ष २०७५ वैज्ञानिकता र वार्षिक भविष्य
विकास र समृद्धिको बाधक- भ्रष्टाचार
गल्ती गर्दैछन् सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित
आरनको पानी ओकल्दाको क्षण